Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi China » Ahụrụ ụgbọ elu US n'ọzara China
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ahụrụ ndị na-ebu ụgbọ elu US n'ọzara China.
Mmekọrịta US na China abawanyela nke ukwuu n'afọ ndị na-adịbeghị anya maka okwu sitere na azụmahịa na nledo ruo na mwakpo obi ọjọọ nke China na nnwere onwe onye kwuo uche na Hong Kong na iyi egwu China na-eyi Taiwan.
China na-ewu ụgbọ mmiri ndị America na-akwa emo zuru oke iji nwalee ngwa agha mgbochi ụgbọ mmiri ya.
Ahụrụ ihe ịkwa emo nke ụgbọ elu US Ford-class na ndị na-emebi ngwa agha abụọ nke Arleigh Burke.
Ụdị ụgbọ mmiri US ndị a na-akwọ ụgbọ mmiri mgbe nile n'akụkụ mmiri ndị China na gburugburu Taiwan.
The Ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri nke United States (USNI) bipụtara ihe o kwuru bụ onyonyo satịlaịtị nke ebumnuche zuru oke n'ụdị ụgbọ elu US Ford-class yana opekata mpe abụọ Arleigh Burke-klas eduzi ndị mbibi ngwa agha. Ndị ụlọ ọrụ ihe onyonyo satịlaịtị Maxar nyere foto ndị a.
Ụdị ụgbọ mmiri ndị America dị otú ahụ na-akwọ ụgbọ mmiri n'akụkụ mmiri ndị China na gburugburu Taiwan.
Ndị agha China na-ewu ụdị ndụ nke ụgbọ agha US na mpaghara nnwale ngwa ọgụ, USNI akụkọ na-ekwu.
Dị ka USNI si kwuo, ebu ụzọ wuo ebumnobi ahụ n'ime ọzara dịpụrụ adịpụ na mpaghara ugwu Xinjiang nke China n'etiti Machị na Eprel nke afọ 2019, wee gbarie ya na Disemba nke afọ ahụ. Ụlọ ọrụ na-eche echiche kwuru, maliteghachi n'ọgwụgwụ Septemba nke afọ a ma wuchaa ya na mbido October.
Ewezuga ebumnuche ebumpụta ụwa nke bụ isi, akụkọ ahụ kwuru na e nwere mpaghara abụọ ọzọ e lekwasịrị anya dị ka ụgbọ elu n'ihi atụmatụ ha. Maxar kwuru na saịtị ahụ nwere ebumnuche abụọ nwere akụkụ anọ dị ihe dị ka mita 75 (ụkwụ 246) ogologo nke etinyere n'ụgbọ okporo ígwè.
Ndị na-ebu ụgbọ elu na ụgbọ mmiri Arleigh Burke-klas bụ akụkụ nke US 7th Fleet, nke ụgbọ mmiri ya gafere na nso oke mmiri ndị China, gụnyere mmiri gburugburu Taiwan, ma soro na Japan, South Korea na Philippines na-eme egwuregwu ụgbọ mmiri.
Dị ka ndị nyocha ndị agha si kwuo, site n'itinye ebumnuche na mpaghara doro anya na satịlaịtị mba ofesi Beijing nọ na-anwa igosi Washington ihe ndị agha ngwa ọgụ ya nwere ike ime.
Mgbe a jụrụ ya banyere okwu ahụ na Mọnde, ọnụ na-ekwuchitere Mịnịstrị na-ahụ maka mba ofesi China Wang Wenbin kwuru na ya amaghị akụkọ gbasara onyonyo satịlaịtị.
N'August 2020, China nwalere DF-26 na DF-21D ogbunigwe mgbochi ụgbọ mmiri ogologo oge, nke ụfọdụ ndị nyocha kpọrọ "ndị na-anya ụgbọ mmiri".
Mmekọrịta US na China abawanyela nke ukwuu n'afọ ndị na-adịbeghị anya n'ihi okwu sitere na azụmahịa na nledo ruo na mwakpo obi ọjọọ nke China na nnwere onwe onye kwuo uche na Hong Kong na iyi egwu China na-eyi. Taiwan.